एनआरएनए विवादको गाँठो कसरी फुक्ला? :: Setopati
एनआरएनए विवादको गाँठो कसरी फुक्ला?
महेशकुमार खाती कोपनहेगन, असोज १५
स्थापनाको हिसाबले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) २० वर्षमा टेक्दैछ । उमेर छिप्पिदै जाँदा व्यवस्थित र पद्धतिमा परिपक्क हुनुपर्ने हो । तर, स्थापनाको २ दशक पुग्नै लाग्दा परदेशका धेरै नेपाली आबद्ध भएको गैर आवासीय नेपाली संघ चरम विवादमा फँसेको छ । र गम्भीर मोडमा उभिएको छ ।
आफ्नो उद्देश्य अनुसार चल्नुपर्नेमा नेतृत्व हडप्ने हानथापमा रस्साकस्सि भइरहँदा एनआरएनए माथि नै गम्भीर शंका उब्जिएका छन् । हरेक २ वर्षमा हुने नेतृत्व परिवर्तनको महाधिवेशन ताका अचाक्लि विवादहरु मात्रै हुँदैनन् । एनआरएनए संस्थाप्रति नै विश्वास घट्दै गएको पाइन्छ ।
अघिल्लो पटकको महाधिवेशन काठमाडौंको तारे होटलमा गर्दा अत्यन्तै विवादित भएको थियो । यसपाली फ़ेरि अझै कोरोना महामारीको कारण पनि १० औं महाधिवेशन दशैं अघि अनलाइन गर्ने भनेर केहि महिना पहिला नै घोषणा भएको थियो ।
सबै ठिकठाक चल्दो हो त, यतिबेला महाधिवेशनको माहोल खुबै ज़म्ने थियो । तर, विवाद यति धेरै भयो की दशैं अघि हुने नहुने अझै टुङ्गो लागेको छैन । विवाद अरु कुनै कारणले नभएर नेतृत्व चयन गर्ने प्रतिनिधिको छनोटलाई लिएर भएको हो । संस्थापन पक्षले एकलौटी प्रतिनिधि चयन गरेको भन्दै अर्को पक्षले पटक-पटक सच्याउन अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि एनआरएनएको नियामक परराष्ट्र मन्त्रालय गुहार्नु परेको बताएको छ ।
यस विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन नहुँदासम्मको लागि चुनाबी सबै प्रक्रिया स्थगन गर्न भनेर पत्र पठाएपछि सारा गतिविधि ठप्प भएका छन्। एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त यतिबेला काठमाडौंमा यसैको मेलोमेसो मिलाउन दौडधुपमा छन्।
विवादको चुरो कुरो अरू हैन अध्यक्षमा लड्दै गरेका उपाध्यक्ष डा. बद्री के.सी र कुल आचार्य बीचको हो। के.सी समूहले मनपरी तवरले आफ्ना मात्रै समेटेर प्रतिनिधि चयन गरेको आरोप आचार्य पक्षको छ। उता के.सी समूहले अति राजनीति गरेको आचार्य पक्षलाई आरोप लगाउने गरेको छ ।
यही विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेपछि निर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्योलमा परेको हो। आचार्य र के.सीसँगै उपाध्यक्ष रवीना थापा पनि अध्यक्षमा लड्ने घोषणा गरिसकेकी छन् ।
आचार्य अघिल्लो पटक पन्तसँग थोरै मत अन्तरले हारेका थिए। प्रतिनिधि झण्डै ३ हजार भन्दा बढ़ी हुने एनआरएनएले बताएको छ। एनआरएनएका संरक्षक रहेका पूर्व अध्यक्षहरुले विवाद टुङ्ग्याउन पहल भैरहेको बताइएको छ ।
एनआरएनएमा देखिएको गम्भीर विवादलाई नजिकबाट हेरिरहेका र अभियानमा सक्रिय केहि व्यक्तिले कसरी हेरेका छन त? समस्या समाधानको बीच बाटो के हुन सक्ला? एनआरएनए अभियानमा लामो समयदेखि सक्रिय तथा पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापाले विवाद रोक्न सस्थापक र पूर्व अध्यक्षले तुरून्तै हस्तक्षेप गरि संस्थाको उद्देश्य अनुरुप अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्।
‘एनआरएनएमा हाल बढ्दै गइरहेको बिकृती, जसरी पनि नेतृत्वमा रहनैपर्ने र जो जो जहाँ जहाँ नेतृत्वमा रहेर संस्था अबैध तरिकाले कब्जा गर्ने जुन चरम दुरुपयोगको स्थिति आएको छ यसलाई रोक्नैपर्छ,’ अफ़्रिका बस्ने थापाले भने,’ संस्थाको साख र गरिमा जोगाउन सचेत सबै लाग्नैपर्ने भएको छ संस्थापक र संरक्षकले छिटो कदम चाल्न पर्छ।’
प्रवासका नेपालीका समस्यामा सहयोगी बन्ने, उनीहरूको उन्नतिका लागि सहयोग पुर्‍याउने र घरदेशको समृद्धिका लागि र अप्ठ्यारो पर्दा भरथेग गर्ने नेतृत्व आउने पद्धति बसाल्न जरूरी रहेको उनले जोड़ दिए ।
विवादले संस्थालाई गम्भीर मोडमा पुर्‍याइरहेका बेलामा धेरैको सुझाव समस्या समाधान गरेर पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने आवाज छ। कतारमा बस्ने एनआरएनएका मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) ले एकलौटी प्रतिनिधि छनोट गरेपछि समस्या शुरू भएको बताउँदै त्यहिँबाट सच्चाउनु पर्ने बताउँछन्।
‘हामीले शुरूबाट भन्दै आएका छौं एनआरएनएको संस्थापन पक्षले आफूहरूलाई सहज हुनेगरि प्रतिनिधि छनोट गर्‍यो यो गलत छ,’ छानविनको माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिने मध्यका एक उनले भने, ‘अब सबै बसेर समस्या समाधानमा जोड़ दिनु आवश्यक छ यति भएपछि सब ठिक हुन्छ।’
यसपालि एनआरएनएमा अनलाइन महाधिवेशन गर्ने तयारी छ। एनआरएनएमा १ लाख भन्दा बढ़ी साधरण सदस्य छन्। ६० भन्दा बढ़ी देशमा समिति छन्। ती देशबाट महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि चयन भएका हुन्। धेरै प्रतिनिधि रहेका अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतमा भने प्रतिनिधि छनोटलाई लिएर ठूलो विवाद छ।
एनआरएनएको पछिल्लो गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेका जापान बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता तथा पूर्व सल्लाहकार डा. बलराम श्रेष्ठले संसारभरि छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीबीच नयाँ प्रविधिको प्रयोगले झन् विश्वास र आशा जगाउनुपर्नेमा उल्टो भएको बताउँछन् ।
‘एनआरएनएको निर्वाचनमा एमआईएस सिस्टमको चरम दुरूपयोग भयो र एनआरएनए अभियानमा एकअर्का प्रति अविस्वास उत्पन्न भएको छ’, उनले भने, ‘समस्या भै सक्यो अब समाधान गर्नुको विकल्प छैन, समयमै महाधिवेशन गर्न सबैमा शुरूबाटै हेर्नुपर्छ।’
जापानको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले उच्चतम् प्रविधिको विकास भएको देशमा एनआरएनएको चुनावमा उल्टो प्रविधिको चरम दुरूपयोग गरेको देखिएको भन्दै प्रतिनिधि विवाद अन्त्य गर्न विधान बमोजिम चल्नुपर्ने धारणा राखे ।
निर्वाचन समितिले तयारी तिव्र पारिरहेको केहि दिनअघि विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ। उम्मेदवारहरुले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। तर, प्रतिनिधिको विषयले महाधिवेशन अन्योलमा छ ।
बेलायत बस्ने बीबीसी नेपाली सेवाकी पूर्व पत्रकार संगीता मरहठ्ठा संस्थाको विधि र विधान अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड़ दिन्छिन्। ‘हरेक कुरा संस्थाको विधि र पद्धति अनुसार हुनुपर्छ, त्यसमा कन्फ्यूज हुनुपर्ने कुरा छैन यति भएपछि सब ठिक हुन्छ,’, एनआरएनएको महाधिवेशनमा महिला संयोजकमा उम्मेदवार बन्ने बताएकी उनले भनिन्।
फोटोमा क्रमशः एनआरएनए अभियन्ता हिक्मत थापा, नवराज ओली (शनि), डा. बलराम श्रेष्ठ र संगीता मरहठ्ठा।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १५, २०७८, २१:५४:००
कोपनहेगन महानगरपालिकामा चुनाव लडिरहेका नेपाली न्यौपाने
कुल आचार्यको प्रतिवद्धता- ‘एनआरएनएको सदस्य संख्या ५ लाख पुर्‍याउँछु’
तेस्रो अर्थात् बुस्टर डोज आवश्यकता कि डर?
पढ्नका लागि डेनमार्क आउँदै हुनुहुन्छ, बेलैमा सोच्नुहोस् नभए दुःख पाइएला!
कुल आचार्यलाई प्रश्न- एनआरएन विवाद के हो र फेरि किन अध्यक्षमा उम्मेद्वारी? (भिडिओ)
एनआरएन अध्यक्षमा त्रि-पक्षीय भिडन्त